ဧရာဝတီ| November 5, 2012 | Hits:7,968
9 | | ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ဘုရင် November 5, 2012 - 2:54 pm	တိုင်းရင်းသားတွေအတူတူနေနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်လိုပါတယ်…ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ အခုကောနေလို့မရလို့လား…၂၀၀၈ ဥပဒေဆွဲလိုက်တာနှစ်ပေါင်း(၁၅)လောက်ကြာသွား ပါတယ်။ အခုတခါ ဘာဥပဒေထပ်ဆွဲချင်သေးလို့လဲ…။ အခုသွားနေတာဒီမိုကရေစီသွားနေ တာလေ။ နောက်ပြန်မလှည့်ခိုင်းကြပါနဲ့တော့။ ခင်များတို့ဆွေးနွေးပွဲတွေဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေ ငတ်တဲ့လူငတ်၊ ပြတ်တဲ့သူပြတ်၊ ကလေးတွေလဲကျောင်းမတက်နိုင် ကြည့်လုပ်ပါဦး…ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ရယ်။ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့လဲ စုံစုံလင်လင်မတက်ကြဘူး။ ဒီလိုလုပ်ကြပါလား …ဆွေးနွေးပွဲမှာ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး ၀ိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးကြပြီး အားလုံးကို မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ကြ…ဒါဆို အားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားပြီ။ ဘာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလဲ အချိန်မကြာကြာအောင်လုပ်နေကြတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကို သနားကြပါအုန်းခင်ဗျာ….။
Reply	3 in 1 November 6, 2012 - 11:26 pm	ဘုရင်..ပြောတာကိုပြန်ကောက်ခြင်းဖြစ်တယ်.. (တိုင်းရင်းသားတွေအတူတူနေနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်လိုပါတယ်…ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ အခုကောနေလို့မရလို့လား)..တဲ့.. အထက်လူကြီးချကျွေးတဲ့ တစ်ပြား တစ်ကျပ်တည်းနဲ့ ကျေနပ်နေသူမဟုတ်တော့ ၂၀၀၈ စာအုပ်ထဲမှာ ငါတော့မနေနိုင်ဘူး… ကျွေးသလောက်စားနေရင်တော့ ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်ဝင်း နဲ့ ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲ၊ အုပ်ချုပ်ချင်တယ်.. ခင်ဗျား(ဘုရင်)အဆို..(၁၅)နှစ်ကြာအောင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ စာအုပ်ထဲမှာ အဲဒါတွေမပါပါဘူး.. အုပ်ချုပ်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစား ၂-မျိုးဘဲပါတယ်.. ဘယ်သူ့ရဲ့လောင်းရိပ်အောက်မှာမှ မနေချင်တော့ပါ.. တိုင်းရင်းသားတွေအတူတူနေနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်လိုပါတယ်..ဆိုတာ.. နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ပြောတာ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး.. ၂၀၀၈ ကို ပိုပြည့်အောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဖို့ပြောတာပါ.. သူငယ်ချင်းအချင်း ချင်းတောင်မှ ခင်ဗျားကို တန်းတူမဆက်ဆံရင် ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားရမလဲ.. တန်းတူအခွင့်အရေးရနေပြီလို့ ယူဆပါသလား.. ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်အပိုင်းမှာ တန်းတူရနေပြီလဲ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို သွားနေပြီပြောတယ်နော်.. အဲဒီ ဒီမိုကရေစီဟာ လူမျိုးတစ်တည်းရဲ့အောက်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်၊ ကျန်လူမျိုးစုအားလုံးဟာ အဲဒီစနစ်ထဲကိုဝင်ရမှာ၊ ကိုယ်ဘယ်လောက်ဘဲတော်နေတော်နေ အဲသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အထက်က လူမျိုးတစ်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ တကယ်ဖြစ်ရမှာက ဒီမိုကရေစီစနစ် တစ်ခုအောက်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး တန်းတူစွာနဲ့ပါဝင်နိုင်အောင်ရေးဆွဲရမှာပါ….
Reply	htetnwin November 9, 2012 - 3:45 pm	စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးဘူးအပစ်ရပ်မယ်….ခုတက်လာတဲ့အစိုးရက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ် အပစ်ရပ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုဘဲနားလည်တယ်လေ။
Reply	kyawmoe November 10, 2012 - 7:23 pm	ကြားဘူးပါ ဘူးအရူးရယ် ဘီလျံနာ ဘီလ်ကိတ် ဘယ်နှစ်ဘီလျံချမ်းသာလဲ တစ်ဘီလျံ ကို မြန်မာငွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ် တွက်ပြပေးပါလား မတွက်တတ်လို့
Reply	sai tai November 10, 2012 - 9:30 pm	ဟုတ်တယ်
Reply	Salai Lian December 18, 2012 - 11:42 pm	This king might be reincarnated Thi Baw who was known as stupid and drunkard. Constitution drafted in 2008 was just to protect the generals from prosecution, not for the people’s liberty. Who drafted 2008 Constitution? Handpicked by Than Shwe. If you read the articles of 2008 Constitution, you will seeawhole bunch of craps. If this Constitution isagood one, why can’t the government implement PEACE and TRANQUILITY in the Union? Because the Constitution has countless holes in it. I might say that the current Constitution must be replaced with the good one drafted by only genuinely elected Representatives, not by handpicked people. Peace talk after peace talk, Burma is going nowhere. Look at Eastern Europe countries. They were communist countries but when they changed their countries into Democratic Nations, it did not take years. Why are the Burmese junta dragging its feet? Mentality of this idiot who claims himself as “King” is what most of the generals have too. Stumbling block to genuine democracy which we all long for.
Reply	Tin Maung Lwin November 5, 2012 - 5:57 pm	ဘုရင်ဆိုသောသူသိစေရန် လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေသာ ကချင်ပြည်နယ်ထွက် သဘာဝ သယံဇာတ တွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၊ ကချင်လူမျိုးစု ကောင်းစားဖို့ ဘာတွေများဖန်တီးခဲ့သလဲ။ ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၈၇ ၀န်းကျင်မှာ ဖားကန့်မြေကတူး ဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ တန် ၄၀ ရှိ်သည်ကျောက်စိမ်းတုံးကိုအကြောင်းပြုပြီး ဦးနေ၀င်းဟာ နိုင်ငံတကာ သူဌေးဘွဲ့ရခဲ့တာ မင်းမသိဘူးလား။ နောက် စစ်အစိုးရ လက်ထက် တန် ၃၀၀၀ ကျော် ကျောက်စိမ်းကို အကြောင်ပြုပြီး၊ သန်းရွှေမိသားစု ဆွေ ၇ ဆက် မျိုး ၇ ဆက် စားမကုန်၊ ဖြန်းမကုန်ဆိုတာရောမင်းမသိဘူးလား၊ ကချင်ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတာတွေ ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလဲ။ မိုးညှင်းနယ်က ကျွန်းသစ်တောကိုရော ဘယ်သူ လက်ညှိးထိုးပြီး တရုတ်ကို ရောင်းစားခဲ့တာလဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အထင်ကရ မန္တျလေးမြို့တော်ကို တရုတ်မြို့ဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေ ဖန်တီးခဲ့တာလဲ။ လူမှုရေး ဦးတည်ချက် ( ၄ )ရပ်ကို ချမှတ်သွားသော မျိုးချစ်သော မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။
Reply	kyawmoe November 10, 2012 - 7:07 pm	မင်းတို့ကေအိုင်အေကရောဘာတွေများ ပြည်သူတွေ အတွက်အနစ်နာခံနေလို့လဲ
Reply	pps12345 November 11, 2012 - 2:26 pm	ကိုကျော်မိုး ခင်ဗျားက စစ်ဗိုလ်ထင်တယ်။ တိုင်းပြည်ကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် ဘယ်သူက ဘယ်လို လုပ်ခဲ့တာတို့ ဘာတို့ သေချာပြန်လေ့လာပါအုံး။ သခင်အောင်ဆန်း သေနတ်တစ်ချက်မှ မဖောက်ရပဲ ဘယ်လို တိုင်းရင်းသားတွေ ကို စည်းရုံးခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြန်လည်လေ့လာပါအုံး။ အင်္ဂလိပ်က ဦးစောလည်း ဗမာပဲ၊ ဆာမြဘူးလည်း ဗမာပဲ၊ အောင်ဆန်းလည်း ဗမာပဲ ဆိုပြီး ဦးစောကို ပဲ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အနေနဲ့လွပ်လပ်ရေး ပေးခဲ့ရင် ခင်ဗျားလက်ခံမှာလာ။ အဓိပါယ်မှ မရှိတာ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးတောင် အန်တီစုကို အားကိုးနေရတဲ့ အခြေအနေမှာ ….စစ်ဗိုလ်တွေက ထင်ရာစိုင်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်အရေးက မတွေးရဲစရာပါ။ ခင်ဗျား တိုင်ဝမ်ပြည် မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ တိုင်ဝမ်တွေ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ပက်သက်လျှင် ဘယ်လို သဘောထားလဲဆိုတာကို သိရအောင်ပါ။ ကုလားတောင် သမ္မတက တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပဲ မှတ်ပုံတင်ပေးနေရတာ ပြည်တွင်းမှာ နဂိုရှိပြီး တိုင်းရင်းသားတွေကို တော့ချမယ် ဆိုတော့ ကောင်းကော။ သခင်အောင်ဆန်းကို စော်ကားတဲ့နေရာမှာ။ ကချင်တွေက သမ္မတ မဖြစ်ချင်ပါ။ သူတို့ဘာမှ မပြောပါ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဆမားဒူးဝါး သမ္မတ တာဝန်လွှဲပြောင်းယူရန် ရထားဖြင့် ရန်ကုန် ဆင်းလာစဉ် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကချင် များ ယခု ထက်ထိ ထိုကိစ္စကို မပြောပါ။ မြန်မာပြည်တွင် သမ္မတရာထူး ကို အချောင်လုပ်ချင်သူများ သည် … အဖွဲ့အစည်းမှ အရာရှိများနှင့် အရာရှိဟောင်းများဖြစ်ကြပါသည်။
Reply	wai lin han November 12, 2012 - 9:39 pm	ဒါတော့ထောက်ခံပါတယ်။ပထမreplyတွက်ဆောရီးပါ။
Reply	pps12345 November 5, 2012 - 5:58 pm	တိုင်းရင်းသာ ပေါင်းစုံ နေထိုင်နိုင်သော ဥပဒေတစ်ခု ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်စနစ် သို့ ပြန်မသွားရန် သာ အရေးကြီးပါသည်။
Reply	တိုင်းရင်းသား November 5, 2012 - 7:59 pm	ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်အနေနဲ့ သွေးနားထင်မရောက်သင့်ပါ ။ သမ္မတအထူးကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း (ဦးအောင်သောင်းမဟုတ်ပါ) လာမည်ကိုသိလျက်နဲ့ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ စားပွဲဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည် ။ သဘေတူညီချက်ရခြင်း ၊ မရခြင်းသည် ဆွေးနွေးကြမည့်သူများ ထို့ထက်တဆင့်တက်ပြောရလျှင် ခေါင်းဆောင်၏ အရည်အချင်းပေါ်တွင်တည်မှီပါသည် ။ အခြေအနေကိုကြည့်ရသည်မှာ ကချင်ဖက်က အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များကို ဦးချိုးနေသည့်ပုံပေါ်နေသည် ။ ယခုထက်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ဘူးသည့် ကမ္ဘာ့အရှုတ်တော်ပုံများပင် စားပွဲဝိုင်းများပေါ်တွင် အဖြေရှာတွေ့ခဲ့ကြသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစေချင်သည် ။
Reply	စိုင်းမူဆယ် November 5, 2012 - 8:03 pm	ကိုတင်မောင်လွင်နှင့်pps12345ရေးပြခဲ့သောတင်ပြခဲ့သော သမိုင်းအထောက်အထားနှင့်အချက်အလက်များကို အားရကျေနပ်မိတယ် တကယ်တော့အရင်စစ်အစိုးရနှင့်ယခုဘောင်းဘီချွတ်အစိုးရတွေဟာသူတို့လက်တစ်ဆုပ်စာ အတွက်သာကြည့်တဲ့အစိုးရတွေပါ တိုင်းရင်းသားအတွက်မပြောနဲ့ဗမာအချင်းချင်းတောင်မပေးချင်တဲ့ဟာတွေ ကုန်ကုန်ပြောရရင်သူတို့အောက်လက်ငယ်သားတွေဖြစ်တဲ့ စစ်သားတွေတောင်တဝမ်းတခါးလှအောင်မဝတ်နိုင်မစားနိုင်ကြဘူး အဲ့တော့ကိုဘုရင်ရေအကို့ကိုကြည့်ရတာသူတို့ဆီက နှစ်ပဲတစ်ပြားကောင်းကြိုးရထားတာနဲ့တူတယ် ကိုဘုရင်ကောင်းကောင်းလေလာပြီးမှဝေဖန်စီစစ်နော် ဘုမသိဘမသိနဲ့ရမ်းထောက်ခံမနေနဲ့ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းနေအုံးမယ်
Reply	ရွှေဂျိုးဖြူNovember 6, 2012 - 8:10 am	အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရလိုပါက ဦးဆောင်သူများ ရိုးသားဖို့ လိုပါသည်။
Reply	Salai Lian December 18, 2012 - 11:59 pm	Shwe Joe Phyu is right. Honesty is nowhere near to be found. This is the problem. Some generals took off their uniforms and put on their Burmese traditional costumes. Their outfits have been changed but their crookedness and their deceitfulness are still remaining in their hearts. Lie after lie, and cheat after cheat. If they do not have love for their own Burmans, how can they love we the ethnic peoples? Illegal land-seizures happen to their own blood. It proves that this government will not do good to the ethnic peoples.
Reply	Shwe Yoe December 19, 2012 - 8:58 am	Prince Shwe Joe Phyu,
Reply	ပေါက်စ November 6, 2012 - 12:52 pm	တိုင်းရင်းသာ ပေါင်းစုံ နေထိုင်နိုင်သော ဥပဒေတစ်ခု ရှိပြီးဖြစ်ပါသည် ဆိုသည်မှာ မသာကိုမိတ်
Reply	Salai Lian December 19, 2012 - 12:08 am	Yes. Absolutely right. This law is not good enough to build the Union of Burma. It is not good enough for all of us. Not good enough for the Myanmars, and it is not good enough for the ethnics. What we all want is to have is genuine democracy. To end all conflicts, we need the Constitution drafted by the people’s representatives, not handpicked byagroup of people oraman like Than Shwe.
Reply	pyisoeminn November 7, 2012 - 4:12 pm	မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်မှုများဟာ ယနေ့အချိန်မှာ လုံးဝနိဂုံးချုပ်သင့်နေပါပြီ။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ၄၇အခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ အစိုးရများကလည်း အားနည်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး တက်လာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကလည်း ပုံစံမပြောင်းဘဲ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်အတွက် ပိုနစ်နာခဲ့တာပါ။ ခံနေရတာက တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေတင်မကဘဲ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာပါ။ တကယ်တေ့ာ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဟာ လုံးဝကို ခက်ခဲအောင် စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်အောင် လုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေကြီး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ စုဝေးဆွေးနွေးခဲ့တော့လည်း အားလုံးရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို မယူဘဲ တစ်ဖက်သက် ဖြစ်ချင်တာကို စစ်အစိုးရအလိုကျ လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဆွေးနွေးပွဲတစ်လျောက်လုံးပါခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်မထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင်းပရပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို အများလက်ခံနိုင်တဲ့အထိ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ပြင်လို့ မရစကောင်းတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာကသာ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ နိုင်ငံတပ်မတော်ရဲ့ အသွင်သစ်ကိုလည်း ပြင်ဖို့လိုတယ်ဗျာ။ စစ်မှုထမ်းပုံစနစ်၊ ပါဝင်ရမည့် အသက်တွေကစလို့ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ တပ်မတော်ဆိုတာ အာဏာရှင်ကြီးတွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်ပဲဖြစ်နေတာ တော်တော်ကြာနေပြီဗျ။ နိုင်ငံသားတိုင်းကို စစ်မှုထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးရပါမယ့်။ စစ်မှုထမ်းဘူးမှလည်း ပြည်ပရန်ဖြစ်လာခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာမှာလေ။ ကျုပ် စစ်မှုထမ်းအငြိမ်းစားဗမာတစ်ယောက်ပါ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့တော့ မသိဘူး။ ကျူပ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်နက်စွန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းပုံစံပီပြင်သွားမှသာ ကျန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် လုံးဝလက်နက်စွန့်လွှတ်သင့်ပါသည်။
Reply	မောင်မောင်မင်း November 9, 2012 - 11:20 am	တကယ်တော့ဗျာ..စစ်ဖြစ်တာဘယ်သူ့အတွက်မှမကောင်းပါဘူး။KIA စစ်သားလည်းအလကားနေရင်းမတိုက်ချင်သလို၊အစိုးရစစ်သားကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်စစ်မတိုက်ချင်ကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့မောဟပြိုင်ပွဲမှာငယ်သားတွေကသေပေးကြရ၊ဒဏ်ရာရပေးကြရတာပါ။
Reply	kyaw December 19, 2012 - 11:38 pm	we stand for kia…keep going by your decision…….